ကျွန်ုပ်အကြောင်း - Hayman Microfinance in Myanmar
ဟေမာန်ကက်ပီတယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အောင်မြင်တိုးတက်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကရှယ်ယာရှင်များမှာ Hayman Capital Pte.,ltd- စင်္ကာပူအခြေစိုက်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဟေမာန်ကက်ပီတယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ပြီး ၎င်း၏အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကို (၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ) တွင်အောင်မြင်စွာ စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်အခါတွင် ကျွန်ပ်တို့လုပ်ငန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး နှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးများတွင် ကွန်ယက်သဖွယ် လုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်ပ်တို့ ရုံးခွဲများကို အင်းစိန် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ လှည်းကူး ၊ ပဲခူး ၊ ညောင်လေးပင် ၊ ပြည် ၊ ပုသိမ် ၊ ဟင်္သာတ ၊ ကျုံပျော် ၊ မန္တလေး ၊ ကျောက်ဆည် နှင့် မိတ္ထီလာ မြို့များအတွင်း ကောင်းမွန်စွာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ၎င်းရုံးခွဲများမှတဆင့် ငွေချေးသူအသင်းသားများရှိရာ မြို့နယ်များ ၊ ရပ်ကွက်များ ၊ ကျေးရွာများကို ခြုံငုံလျှက် လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပေးထားသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ချက်လိုင်စင် အမှတ်- ၀၂၃၂/၂၀၁၆ ဖြင့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်ပ်တို့လုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး တစ်မူ ထူးခြားသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကူညီထောက်ပံ့မှု လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။ ဟေမာန်ကက်ပီတယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ဝင်ငွေအလွန်နည်းပါးသော မိသားစု၏ လိုအပ်ချက်များကို ကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ထားသည်။ ထိုကဲ့သိုဝင်ငွေနည်းပါးသော မိသားစုများအတွက် ငွေကြေးလိုအပ်မှုများကို လွယ်ကူစွာရယူနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ချမှတ်ထားသော နည်းဗျူဟာ ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ကာလအတွင်း အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျွန်ပ်တို့၏ ငွေချေးဖောက်သည်များ ပိုမိုတိုးတက်ရန် စီမံကိန်းထားရှိပါသည်၊၊ ကျွန်ပ်တို့သည် online platform နည်းပညာဖြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း ၊ လုပ်ငန်းနယ်မြေသစ်များတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ အစီရင်ခံစာများ ပေးပို့သည့်စနစ် ၊ CSR လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများပို့ချခြင်း အစရှိသောလုပ်ငန်းများကို ကျွန်ပ်တို့၏ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ရန်စီမံကိန်းများထားရှိပါသည်၊၊
ကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဦးဆောင်နိုင်သည့် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာရန်နှင့် သန်းပေါင်းများစွာသော ဖောက်သည်များကို ကျယ်ပြန့်သော ကွန်ယက်စနစ်ဖြင့် ရုံးခွဲများမှတစ်ဆင့် အရည်အသွေးရှိသော ချေးငွေထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီသော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စည်မျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်၊၊
ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များနှင့် ရည်ရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ၎င်းတို့၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားလာစေရန်နှင့် ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်၊၊ ထို့အပြင် ငွေချေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုစေရန်ဖြစ်သည်၊၊ ဟေမန်ကက်ပီတယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အခြေခံစည်းမျဉ်းများမှာ ရည်ရှည်အပြန်အလှန် အကျိုးပြုဆက်ဆံရေး တည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်၊၊
ငွေချေးသူဖောက်သည်များနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် ၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် ၊ ရိုးသားမှု နှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ ဖြစ်စေရန်
ဝန်ထမ်းများနှင့် အပြန်အလှန်လေးစားရန် ၊ ခိုင်မာစွာလက်တွဲနိုင်ရန် ၊ အလုပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားခြင်း ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းမြင့်တင်စေရန် နှင့် သင့်လျော်သောအခကြေးငွေများရရှိစေရန် ဖြစ်သည်။
ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်နှီးမြုပ်နှံခြင်းများတိုးတက်မှုရှိကြောင်းသိစေရန် သေချာစွာဆောင်ရွက်ရန် ၊ လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများခိုင်မာတည်မြဲရန် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အာဏာရှိသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီစွာသေသေချာချာလုပ်ဆောင်ရန် တို့ဖြစ်သည်။
အကျိုးတူ ပူးပေါင်းသူများနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေရှည်ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးရှိစေရန် ၊ ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေသော တာဝန်ရှိခြင်းများနှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် ဖြစ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အလုပ်အကိုင်သစ်များ ဖန်တီးပေးရန် ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာဓလေ့ပညာများ တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်နှင့် နိုင်ငံ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တစ်ခုတွင် ယုံကြည် အားထားရသော အနေအထားတစ်ခုကို ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ( EU, CIS incl. Uzbekistan ) စသော နိုင်ငံများတွင် အထက်ရာထူးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်သည်။ ( ABN AMRO group) လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ် လည်းကောင်း ၊ အက်နာရိုဘဏ် (ABNAMRO Bank ) တွင် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌအဖြစ် ၎င်း ၊ Uzbekistan နိုင်ငံတွင် (ABN AMRO Bank ) ဘဏ်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် မန်နေဂျာအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ရုရှားနိုင်ငံအပါအဝင် ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ၊ ဥရောပအရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ (ABN AMRO Bank N.V.) ဘဏ်၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ဦးဆောင်သူ ဒုတိယ- ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယခုလက်ရှိဟူဂိုသည် (Pakistan ၊ Arnur Credit ၊ Kazakhstan) နိုင်ငံ များတွင်ရှိသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သော (Advans Microfinance Bank ) တွင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ (Uzbekistan) နိုင်ငံရှိ ( IpakYuli Bank ) ဘဏ် ၏ အကြံပေး အထက်အရာရှိ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံ ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန် နိုင်ငံများတွင် လေးစားဂုဏ်ပြုထိုင်သော အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည် စာရင်းစစ် နှင့် အခက်ခဲပြဿနာဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်သူ ဥက္ကဌတစ်ဦးဖြစ်သည်။
Over 20 years of senior experiences in Oil & Gas and Finance businesses across Central Asia, Europe, Southeast Asia. Shyngys is the Chairman for the Hayman Group since 2014 when he founded the Group. In addition, he was the General Director for7years of Kuat Holding, the largest independent oil producer in Kazakhstan in 2009. He has also playedaleading role in building and developing key portfolio assets of Berlanga as the Managing Director since 2014. Shyngys holds an Executive MBA from CASS Business School andaBSc in Petroleum Engineering and IT Software Engineering from Kazakh Technical University.
Suga is presentlyaSenior Investment Officer with Emerging Markets Investment Advisers,aMekong-focused development fund. She was previously an Investment Analyst at Creador,aSoutheast Asian private equity fund. Prior to that, she worked asapetroleum economist with Hibiscus Petroleum, Malaysia’s first listed independent oil and gas exploration and production company. Suga graduated from Yale University withaB.A in Economics and International Studies and isaCFA charterholder.
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် နှင့် စီမံကိန်းတိုးတက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလေးထားလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးကဏ္ဍ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် အရှိန်အဟုန်တိုးမြင့်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းစသော လုပ်ငန်းများတွင်၂၅နှစ်မျှ အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်သည်။ ဒေးဗစ်သည် ရုရှားတွင် အခြေစိုက် ၆ နှစ်ကြာ ၊ အာဖရိကတွင် အခြေစိုက် ၅ နှစ်ကြာနေထိုင် အလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ယခင်က ဒေးဗစ်သည် စီးတီးအုပ်စု ( Citi Group ) လုပ်ငန်း ၊ မော်စကိုတွင်ရှိသောဒွိုက်ရှယ် ဘဏ် ( Deutsche Bank ) နှင့် ( Troika Dialogue ) လုပ်ငန်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမန်နေဂျာတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒေးဗစ်သည် နော်မူရာ နိုင်ငံတကာ ( Nomura International ) လုပ်ငန်းတွင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ဆောင် ချိန်တွင် ကျယ်ပြန့်သော ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်း ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်သည်။ ဥပဒေသိပ္ပံမဟာဘွဲ့( MA in Jurisprudence) ကိုအောက်စဖို့စ် တက္ကသိုလ်( Oxford University) မှဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ၁၂ နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ စထာပနာ (SATHAPANA ) ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်အရာရှိချုပ် (Chief Operating Officer) အဖြစ် ၃ နှစ် ၊ (Deputy Head of Credit) အဖြစ် ၂ နှစ် ၊ SME ချေးငွေ ထုတ်ချေး မန်နေဂျာအဖြစ် ၂ နှစ် ၊ ချေးငွေထိန်းချုပ်မန်နေဂျာအဖြစ် ၁ နှစ် ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်အရာရှိအဖြစ် နှင့် ချေးငွေအရာရှိအဖြစ် ၄ နှစ်ထိဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စထာပနာ လီမိတက်သည် လက်ရှိအချိန်တွင် စထာပနာဘဏ် (SATHAPANA Bank) ဟုလူသိများပြီး cambodia နိုင်ငံတွင် ဦးဆောင်နေသော စီပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟေမာန်ကက်ပီတယ် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်မတွဲမှီ သူသည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း စတင်ခြင်း ၊ တိုးတက်မှု ၊ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ရည်ရှည် တည်တံ့ တိုးတက်ခြင်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းဆောင် မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု အတိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ၆ လကြာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စီပွားရေး နှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ မဟာတက္ကသိုလ် (Royal University of Law and Economics) မှ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသား တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာန ၊ နေပြည်တော် – စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန တွင် Director အဖြစ်၎င်း ၊ Small Loan enterprise တွင် မန်နေဂျာအဖြစ်၎င်း ၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဌာန (နေပြည်တော်ကောင်စီ) ၏ ဒု-ညွန်ကြားရေးမှုးအဖြစ်၎င်း ၊ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး ဌာန (ရုံးချုပ်)၏ ညွန်ကြားရေးမှုးအဖြစ်၎င်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်၊၊သူမသည် Indiaနှင့် Combodia တို့တွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လေ့လာရေးခရီးဖြင့် သွားရောက်လေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် University of YangonမှB.A(Ecom)ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်သည်။